गाउँघरबाट : शुभचन्द्र राई (सुबास)को कथा ‘डुम्फुरे’ - LIBJU BHUMJU
गाउँघरबाट : शुभचन्द्र राई (सुबास)को कथा ‘डुम्फुरे’
September 16, 2021 September 23, 2021 लिभु संवाददाताLeaveaComment on गाउँघरबाट : शुभचन्द्र राई (सुबास)को कथा ‘डुम्फुरे’
गाउँघरबाट : डुम्फुरे
पिठ्यूको सानो बोराको पोकोलाई नाम्लोसँगै कुनामा फ्यात्त फाल्यो र खुइया सुइसुला मारेर पिंढीमा थचक्कै बस्यो डुम्फुरे । उसले मैलाले कक्रिएको ठाउँठाउँमा फाटेको शिरको ढाका टोपीलाई निकाल्यो र त्यसैलाई रुमाल बनाएर अनुहारको पसिनालाई पुछ्यो । चाउरिएको गाला, टोड्को परेको आँखा, टुसुक्क निस्किएको ध्याब्रे नाक, ओंठमाथि २०, २५ वटा जति सराबरी फुलेको जुङ्गा र चुस्स बोकेदारी, जुगदेखि नमाझेको पहेलो कालो दाँत, बाँस जस्तो लिन्ठिङ्ग सुकेको शरीर साँच्चै डुम्फुरे खेतमा बाँदर तर्साउन बनाएको बुख्याचा झैं देखिन्थ्यो ।
उसले आफ्नो फाटेको झुत्रो इष्टीकोटको बगली छाम्यो र एउटा मैलो थैलो झिक्यो । थैलोबाट पात र सुर्ती झिकेर उ सुल्पा (सुर्ती) बेर्ना थाल्यो । उसले छस्सै सलाई कोर्यो र सुल्पालाई सल्काएर एक लामो कश लियो । धुँवाले सर्केर होला डुम्फुरे एकपल्टप्राण परेर खोक्यो र ख्याक्क गरेर एक लप्रा खकारफ्यात्तै थुक्यो र फेरी सुल्पा तान्न थाल्यो ।
साँझ पर्नै लागेको थियो । घरसुनसान थियो । एक दुएक भएका कुखराहरु बास बस्नका लागि खोर छेउ छाउ प्याँउप्याँउ, पिउँपिउँ गर्दै यताउता गरिरहेका देखिन्थे । घर पछाडी बनाएको सानो छाप्रोमा बाख्रीपाठी कराएको सुनियो म्यायायाक् म्यायायक्..।
दिनभरी कामको खोजीमा बजार चाहारेर भोकै र रित्तै घर फर्केको डुम्फुरेलाई घरको वातावरण देखेरदिक्क लाग्यो । ऊ जुरुक्कै उठ्यो र यताउता गर्दै गनगनाउन थाल्यो । होइन घरका सब कहाँ मरेछन् हँ ? उ पिंढीबाटै लेघ्रो तानेर करायो –‘ए सन्तेकी आमा….? सन्तेकी आमा … ।?’
पल्लो घरकी सेतेकी आमा आँगनमा निस्किन् र बोलिन् –‘सन्तेकी आमा त सिरान टोल धामी कहाँ पो गएकी छिन् है काइला । खै अघि बेलुकादेखि प्यान्चीलाई के लाग्यो लाग्यो । फत्रक फत्रक भईन् भन्दै थिइन् ।’डुम्फुरे झसङ्ग भयो । उसले नमिठो मुख बनाउदै‘ए….।’ भनेर लामो लेघ्रो तान्यो । ‘अनि सन्ते, चुर्सी, मैना चाँहि कता गए त भाउजु, एउटै छैनन् त घरमा…?’डुम्फुरे गनगनायो । ‘खै सन्ते त तिमी हिड्न साथ घरबाट हिडेका रे आएकै छैन भन्थी काइली …, अरु चाँहि कता लागे कोनी ? अघि सम्म त घरमै पो थिए हौ…..।’सेतेकी आमाले डुम्फुरेलाई बेली बिस्तार लगाइन् ।
त्यसैबेला चुर्सी र मैना आइपुगे । खोल्छी धारामा पानी लिन गएका रहेछन् । करिब ९ बर्षकी चुर्सी र ७ बर्षकी प्यान्ची आफ्नो क्षमता र ओजन भन्दा गह्रौ सिलबरे गाग्रो र प्लाष्टिकको जर्किनमा सकिनसकी पानी लिएर आएका थिए ।
‘दाजु खोई चुर्सी ?’ डुम्फुरे कुर्ले ।
‘दाजु त खै कता गए कोनी आएकै छैनन् ।’ चुर्सीले सोझो जवाफ दिइन् ।
डुम्फुरेलाई सनन रिस उठ्यो, उ गनगनाउँदै हुत्तिएर घरभित्र पस्यो र चुलामा आगो फुक्न थाल्यो । झमक्कै अँध्यारो भैसकेको थियो । भर्खरै कामबाट आइपुगेको, भोक र थकाइले पनि उसलाई त्यत्तिकै सताएको थियो तर पनि समस्या आइलागे पछि भोक थकाई भन्न पाइएन, उ छोरीहरुलाई भात भान्साको बन्दोबस्त मिलाउन अह्राउँदै झुप्रो घरको पछाडि बनाएको छाप्रो तर्फ लाग्यो । माईला साहुले अधियामा पाल्न दिएको एउटी पठ्याङग्री कराएर मर्न लागेको रहेछ । डुम्फुरेले नजिकै राखेको डाले घाँस हालिदिए । त्यत्ति नै बेला सन्ते देखा पर्यो । डुम्फुरेको पारो एक्कासी १०७ डिग्रीमा पुग्यो ।
‘तेरीमा छाडा तेरो घर आउने बेला बल्ल भयो …?’ डुम्फुरेले टाढैबाट लौरोको झट्टी हान्यो सन्तेलाई । लौरो सन्तेको खप्परमै गएर बज्रियो । ऊ हुरुक्कै भयो । डुम्फुरेको रिसै मरेन । उसले अझै गएर सन्तेलाई ३, ४ सिर्कना बजायो । सन्ते रुँदै लडिबडी गर्न थाल्यो । सधै कामबाट ढीला आउने बाउ आज पनि राती मात्र आउलान् भनेर अबेला सम्म साथीहरुसँग भकुण्डो खेलेर फर्केको सन्तेलाई शनिग्रहले छोयो । उसको अनुमानले फेल खायो । बाउ त दिउसै पो आइपुगेछन् र उसले यो दशा भोग्नु पर्यो ।
नानीलाई ढाँडमा तौलियाले बेरेर हातमा एक मुठा साग लिइ आइपुगिन् सन्तेकी आमा चमेली पनि । डुम्फुरेको पारा केही कम भयो । ‘पेन्चीलई अहिलेकस्तो छ हँ?’ उसले हत्तपत्त प्रश्न तेर्साए ।
‘खै अघि पाठीलाई यसो एकमुठा डालेघाँस ल्याईदिन पर्यो भनेर नानीलाई च्यापेर त्यो साझे जङगलतिर गएकी थिएँ त्यहींको वायू लागेछ । माथि तल भईहाली । धामीले फुकेपछि भने मसक्कै निदाईन् अब ठीक हुन्छ होला, होइन त्यो ठाउँको वायु त कस्तो छत्छत्तीको हौं । झन्डै मार्यो मेरी छोरीलाई ।’ चमेली फत्फताईन ।
साँझको भात भान्सा सकियो । केटाकेटी सबै भात खाएर सुते । सन्तेले कुटाई खाएकोले होला अलि कम भात खायो । बूढाबूढी घरको टाकानटुकुन सकेर गफ गर्न थाले ।
‘अनि आज त बेलामै कामबाट फर्केछौं । केही काम पाएनौ कि के हो ? घरमा चामल, दाल नून, तेल सबै सकिनै लागेको छ । सकिए पछि सबै एकैचोटी सकिन्छ । सन्तेकी आमाले रसाएको आँखाले बुढालाई पुलुक्कै हेर्दै घरको समस्या पोखिन् ।
‘खै सन्तेकी आमा यो कोरोना र लकडाउनले त हामी जस्तो गरिबलाई जिउदै मार्ने भयो । सहर बजारमा सबै साहुमहाजनको पनि बिजोगै देख्छु । दोकानहरु बन्दका बन्दछन् । खोले पनि किन्ने मान्छे छैनन् । सबै व्यापार व्यवसाय चौपट भएको छ । यस्तो बेला काम पनि कहाँ पाउनु ? कस्ले काम दिने ? हामी जस्तो भरियाहरु बजार गयो नाम्लो बोकेर दिनभरी बजारको चौतार रुँघ्यो । कसैले बोलाईहाले आनासुकी भईपनि हाल्छ नत्र बेलुका खालीपेट, रित्तो हात घरफक्र्यो । पुलिसले भेटे लकडाउनको बेला कहाँ हिडिस् भनेर कुकुरलाई झै भाटाले खेद्छन्यस्तै नै रैछ हाम्रो जिन्दगी….थुक्क यस्तो जिन्दगी…।’ सन्तेको बाउँ डुम्फुरे केटाकेटी जस्तै घुक्क घुक्क रुन थाल्यो ।
आफ्नो लोग्ने रुएको देखेर सन्तेकी आमा चमेलीले पनि मन थाम्न सकिनन् ‘अब त हामी जस्तो गरिब गुरुवाले त भातै खान नपाईने भयो… कसरी बाँच्ने त ?’ उनी पनि लोग्नेसँगै सुकसुक रुन थालिन् ।‘आज एकजना साहुको आलुको बोरा गोदामबाट पसलसम्म लागि दिएको सयरुपे दिएको थियो त्यै पैसाले ४ किलो सस्तो दामको चामल ल्याएको छु । यसले पनि दुईतीन छाक त टर्छ । आज त एक गिलास रक्सी खाने पैसा पनि भएन ।
पसलमा सबै सामानको भाउ बढेर छोईसक्नु छैन । नुन, तेल, आलु, लसुन प्याज, टमटर, अदुवा सबैको मूल्य आकाशिएको छ । हामी जस्तो गरिबले त किन्ने हैन हेर्ने मात्र हो । त्यै पनि काम पाए त अलिलि पैसा हुन्थ्यो महँगै भएपनि एकदुई छाक आँत मार्न त पाईन्थ्यो तर काम नै नपाएपछि अब भोकै बस्नु बाहेक हामीलाई कस्ले दिन्छ, ?कस्ले हेर्छ ? हामी गरिबको लागि सरखार त छैन, छैन । भगवान पनि रैन छ नत्र यस्तो दुःखमा त हेर्नु पर्ने हो ? डुम्फुरेले दाहिने हातले स्याप्पै आँशु पुछे ।
‘त्यो सार्केकी बुढी रामकली सुत्केरी भएछिन् हिजो मात्र । छोरो पाईन् रे । घरमा खाने अन्नको दाना छैन रे । तिमीजस्तै सार्केले पनि काम नपाएको महिनौ भयो रे । बिचरा घर निमार्णमा लेबरकाम गर्थे अहिले ठेकेदारले काम नै छैन भन्छ रे । हामी गरिबलाई ऋण पनि कसले पत्त्याउछ र ? सबैको अवस्था त्यस्तै हो । छरछिमेकी मिलेर माना मुठी उठाएर केही चामलर एकरुपे दुइरुपे जम्मा पारेर अलिकति नूनभुटन र एउटा कुखुरा किनिदिए रे । आपतको बेला गरिब नै गरिबको सहारा बन्ने रैछ । तिमीले चामल ल्याएछौ एक किलो जति दिनु पर्छ है रामकलीलाई ।’ सन्तेकी आमा चमेलीले आफ्नो अवस्था जस्तो भएपनि रामकली प्रति सहनुभूति पोखिन् ।
‘ए… सार्के फेरी बाउ बनेछ ? खै सहयोग त गर्नुपथ्र्यो नि । त्यसले पनि तँ सुत्केरीहुँदा एक सेर रक्सी र एउटा कुखुरा किनेर ल्याईदिएको गुन कहाँ बिर्सेको छु र ? त्यतिबेला त त्यो पनि कमाउथ्यो म पनि कमाउथे । खै अहिले यस्तो बेहाल छ । हुन्छ घरमा जे छ त्यहि लगिदिनु ।’ डुम्फुरेले अमिलो मन बनायो ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले देशमा जनताको सरकार छ कोही नेपाली भोकै बस्न पर्दैन, भोकले मर्न दिंदैनभन्थे । जनताको घरमा चामल सकिए कार्यकर्ताहरु बोरामा चामल बोकेर घरमै आईपुग्छ भन्थे । जेष्ठ नागरिकहरुको हातमै ट्याक्कै पाँचहजार बृद्ध भत्ता आउछ भन्थे । सिलिण्डर बोकेर ग्याँसको लाईनमा उभिन पर्दैन घरमै पाईपबाट ग्याँस आउछ भन्थे । डिजेल पेट्रोलले चल्ने धुँवा उडाउने गाडी हैन अब देशमा धुँवा रहित बिजुलीबाट सलल चल्ने गाडी गुड्छ भन्थे ।
केरुङ देखि रेल सलल कुदेर पोखरा कुश्माहुँदै बेनी पुग्छ । कुश्मामा त रेल स्टेशन नै हुन्छ भन्थे । नेपालको पानी जहाज नेपाली झण्डा फरफराएर समुन्द्रमा सलल कुद्छ भन्थे। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारा लेखेर काठमाण्डौको बिजुलीको पोलैभरी प्रधानमन्त्रीज्यूको फोटो टाँसेर रातरात देश विकास भयो भन्थे तर डुम्फुरे र सार्केहरुले यसबारे कहिल्यै थाहा पाएनन् । उनीहरुलाई यस बारे चासो पनि भएन, रहेन । किनकी उनीहरुलाई त डोको नाम्लोले कहिल्यै छोडेन । बिहान खाए बेलुका के खाउँ ? बेलुका खाए बिहानको छाक कसरी टारौ भन्ने चिन्तामै उनीहरुको जिन्दगी सकिन लाग्यो ।
हेर्दाहेर्दै जङ्गल पसेका नेताहरु सहर पसे । स्याप्पै भुँडी सुकेका ख्याउटे मरन्च्याँसे नेताहरुको भुँडी पुटुस्सै उक्सिएर खाईलाग्दो भयो । हात्ती छाप चप्पल लगाएर लुखुर लुखुर हिड्ने नेताहरु टाईसुट लगाएर चिल्ला गाडीम गुड्ने भए । देख्दा देख्दै गाउँमा बुकुरो घर भएका नेताहरुको सहरमा आलिशान बंगलाहरु ठडिए । कहिले काही ढीडो र गुन्द्रुक पनि नजुर्ने नेताहरुको खाने टेबलमा मार्सी चामल र कुखुराको साप्रा, खसीको सुरुवा सजियो तर चमेली र रामकलीहरुले सुत्केरीहुँदा पनि गुन्द्रुकको झोल समेत खान पाएनन् ।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको प्रकोपबाट जनतालाई जोगाउने नाममा बिना तयारी, बिना योजना हतारमा सरकारले मुलुकलाई लकडाउनको घोषणा गर्यो । केही दिन त सबैलाई काम गर्दागर्दा थकित ज्यान बिसाउन पाएकोमा हुनसम्मको मज्जा र आनन्द नै आयो । तर लकडाउन दिन, हप्ता, हुँदै महिना पुगेपछि डुम्फुरे र सार्केहरुको घरमा रासनपानी सकिंदै गयो र उनीहरुको छटपटी बढ्दै गयो । यसबिच सरकारले करोडौको राहत बाँडेको खर्चको हिसाब निकाल्यो तर त्यो राहत ककस्ले पाए कोनी यता चमेली र रामकलीहरु चै भोकै थिए ।
कोरोनाबाट जनतालाई बचाउने सरकारको कर्तव्य थियो । लकडाउन गर्न ठीकै थियो होला । मासिक सरकारी तलब थाप्नेहरुलाई त लकडाउन सारै गजब भयो पनि । तर डुम्फुरे र सार्केहरुजस्तो दिनभरी काम गरेर हातमुख जोर्नेहरुको लागि भने लकडाउन काल बन्यो । चमेली र रामकलीहरु भोकै बस्न पर्दा सरकारको मन पटक्कै दुखेन । सायद संसारकै उत्कृष्ट जनताको सरकारको नमूना होला यो ।
यता जनता कोरोनाले, रोगले,भोकले मर्दै छन् उता सरकार करोडौ, अरबौको भ्रष्टचार गर्ने र गर्नेहरुलाई जोगाउने खेलमा व्यस्त भेटियो । यता लकडाउनले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कलकारखानाहरु चौपट छन् उता नेताहरु कुर्सी पद र पैसाकाो बार्गेनिङमा व्यस्त देखियो । यसैलाई भनेको होला समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।
‘भोली त अलि झिसमिसे मै हिड्नु पर्यो । बिहान बा केही काम पाईहालिन्छ कि ? भोली काम पाएँ भने चै आधा किलो जति सुँगुरको मासुपनि ल्याउनु पर्यो केटाकेटीले मासु नखाएको पनि धेरै भयो ।
मस्यौरासँग मिसाएर पकाउनु पर्छ सबैलाई पुगिहाल्छ । त्यो सार्केको जहानलाई पनि चार दाना जति कुखुराको फुल ल्याईदिनु पर्यो । पैसाले पुगे अलिकति तेल र चामल पनि ल्याउछु ।’ डुम्फुरेले भोलीको मिठो सपना बुन्यो र आफ्नो योजना स्वास्नी चमेलीलाई सुनायो । लोग्नेको कुरा सुनेर चमेलीको रुन्चे अनुहार पनि उज्योलो भयो ।
आखिर गरिबले पनि सपना त देख्न पाउछ नि ।…‘लु सुतौ अब ।’ डुम्फुरेले जिउ तन्काउदै लामो हाई काढ्यो । रात बिस्तारै छिपिंदै थियो । टाढा कतै कुकुर रुएको बिरहीलो आवाज आयो उहुउँउँ…….। उहुउँउ……।।
किरात सिरिजङ्गा लिपिमा लिम्बुहरुले कपीराइट दाबी गर्न मिल्दैनः अमर तुम्याहाङ
इतर आवाजले कोरियामा कविता कन्सर्ट गर्ने
जन्मे पछि ८ , ९ वर्षमा पहिलो चोटी जे भाषा सिक्छ त्यही नै हो मातृभाषा प्रा.डा. नाेबलकिशोर राई
बेलायतमा साँस्कृतिक सहिद रिदामा र राम्लिहाङलाई सम्झँदै अभियन्ताहरू
October 15, 2021 लिभु संवाददाता
October 13, 2021 लिभु संवाददाता
October 7, 2021 October 7, 2021 लिभु संवाददाता
September 30, 2021 October 13, 2021 लिभु संवाददाता
गगन राईको गीति–काव्य : प्रिति
September 28, 2021 लिभु संवाददाता
Uneklyvodl commented on हङकङमा नेपाली पत्रकारिताको स्तम्भ एभरेस्ट खबर पत्रिका र सम्पादक किसन राई: side effects of plaquenil hcq
Uneklyvyks commented on हङकङमा नेपाली पत्रकारिताको स्तम्भ एभरेस्ट खबर पत्रिका र सम्पादक किसन राई: hydroxychloroquine sulfate tablets https://chloroq
MichaelHeelo commented on हङकङमा नेपाली पत्रकारिताको स्तम्भ एभरेस्ट खबर पत्रिका र सम्पादक किसन राई: cialis coupon [url=https://cialiswithdapoxetine.co
JamesBicle commented on संगठित हुँदै इन्डियन आर्मीमा कार्यरत वाम्बुले राईहरू: [url=http://traffco.su/5][img]https://zoostar.ua/d